Luka Modrić oo hal arrin ka codsaday saaxiibkiis kooxda Real Madrid ee Gareth Bale – Gool FM
(Europe) 15 Okt 2019. Xiddiga khadka dhexe xulka qaranka Croatia iyo kooxda Real Madrid ee Luka Modrić ayaa ka codsaday saaxiibkiis Gareth Bale inuu sii joogayo sanado badan garoonka Santiago Bernabéu.
Hadalka Luka Modrić ayaa wuxuu imaanayaa xilli ay soo baxayaan dhawaanahan warar sheegaya in laacibka reer Weles uu doonayo inuu ka dhaqaaqo kooxda Real Madrid suuqa furmi doono bisha Janaayo ee soo aadan.
Wararka qaar ayaa waxay sheegayaan in Gareth Bale uusan ku faraxsaneyn sida uu ula dhaqmayo tababarihiisa Zinedine Zidane inkasta oo uu inta badan ku lug lahaa kulamadii ay Los Blancos ciyaartay xilli ciyaareedkan, hadana wuxuu si dhab ah uga fiirsanayaa inuu ka tago kooxda sababtoo ah ma uusan helin qadarintii uu u qalmay sida warbixinta lagu xusay.
Haddaba wargeyska “AS” ayaa shaaca ka qaaday wareysi uu bixiyay Luka Modrić, kaasoo uu kaga hadlay saaxiibkiis Bale, waxaana hadaladiisa ka mid ahaa:
“Dabcan waxaan rajeynayaa inuu sii joogo xilli ciyaareedkan iyo sidoo kale xilli ciyaareedyo badan”.
“Waa ciyaaryahan cajiib ah, aadna muhiim ugu ah kooxda, si wanaagsan ayuu u shaqeynayaa xilli ciyaareedkan, waxaan rajeynayaa inuu nala sii joogi doono”.